Mitsubishi F-2A / B FSX & P3D - Rikoooo
Onye edemede: Team FS KBT, Hiroaki Kubota
Mitsubishi F-2 na mbipute A na B na igwe elu ikpo okwu, ngwugwu zuru ezu nke otu ndi Japan ama ama FS KBT. Gụnyere ntụgharị 30, parachute, ngwá agha na ọtụtụ igwefoto na eserese.
Mitsubishi F-2 bụ onye agha nke multi-azụ nke sitere na General Dynamics F-16 na-alụso Falcon, nke Mitsubishi Heavy Industries na Lockheed Martin rụpụtara maka Japan Air Self-Defence, na 60 / 40 kewara n'etiti n'ichepụta n'etiti Japan na United States. Mmalite malitere na 1996 na ụgbọelu nke mbụ abanyere na 2000. Mbụ ụgbọ elu 76 ahụ malitere ọrụ na 2008, yana mkpokọta 94 airframes mepụtara. Mgbasa radar nke a na-arụ ọrụ na mbụ (AESA) na-arụ ọrụ na bọmbụ ọgụ bụ J / APG-1 ẹkenam na Mitsubishi F-2 na 1995 (Wikipedia)
Lee nkọwa ụfọdụ bara uru